Ukusetha i-KDM | Kusuka kuLinux
phico | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sawubona Abalandeli be-KDE! Futhi lapha futhi kulokhu ngikulethela ukuthi ungayilungisa kanjani imenenja yokungena ye-KDM njengoba njengoba ubonile, okufakiwe nje okuluhlaza okotshani kokuthandwa kakhulu. Labo abangakafaki i-KDE yabo ku-Debian, sincoma ukuthi ufunde i-athikili I-KDE esheshayo nenhle.
Kusukela manje kuqhubeke sizofunda:
Ungayilungisa kanjani i-KDM?
Usebenzisa umyalo we-kcmshell
Ungayilungiselela kanjani i-KDM ukwamukela izicelo ze-XDMCP?
Ungaqala kanjani iseshini ekude kwenye ikhompyutha?
1 Ungayilungisa kanjani i-KDM?
2 Usebenzisa umyalo we-kcmshell
3 Ungayilungiselela kanjani i-KDM ukwamukela izicelo ze-XDMCP?
4 Ungaqala kanjani iseshini ekude kwenye ikhompyutha exhunywe kunethiwekhi?
Esahlukweni 4 Sosizo lwe-KDE “Ukulungiselela i-kdm” uzothola incazelo eningiliziwe yokuthi ungayilungisa kanjani iMenenja yokuFinyelela ye-KDM. Asizimisele ukufaka esikhundleni salolo sizo, kepha ukukhombisa izinyathelo ezisezingeni eliphansi okumele sizilandele ukucushwa kwalo. Ikakhulukazi "abangenasineke" abafuna ukuba nemvelo yabo ibe mnandi ngangokunokwenzeka ngenani elincane lokufunda.
Kodwa-ke, sincoma ukuthi wonke umuntu afunde izinto ezimnandi zokutadisha ku- "KDE Help Center".
Isexwayiso: Izinguquko esizenzayo kumodyuli ye-Access Manager zizobhala ngaphezulu ifayili le- / etc / kde4 / kdm / kdmrc, elisesimweni salo sokuqala linemibono eminingi ukukusiza ukumisa i-kdm. Kusetshenziswa le mojula Yezintandokazi Zesistimu kuzonyamalala imibono yalelo fayela. Ngalesi sizathu, sincoma ukuthi ngaphambi kokusebenzisa imodyuli wenze ikhophi yokusekelayo yefayela kwifolda ehlukile noma ukuthi uyikopishele kufolda efanayo enegama elehlukile. Lo mkhuba unconywa kakhulu kuwo wonke amafayela wokumiswa kohlelo futhi singakwenza sisebenzisa umyalo:
sudo cp / etc / kde4 / kdm / kdmrc /etc/kde4/kdm/kdmrc.original
Ukufaka imodyuli yeMenenja Yokufinyelela:
Kusetshenziswa inhlanganisela yokhiye I-Alt + F2 o Imenyu -> Yenza i-oda, sizocela ifomu lokumiswa kwe-KDM ngokuthayipha umyalo kdesudo kcmshell4 kdm. Uma sikwenza kusuka kukhonsoli ungakhohlwa ukubhala kdesudo esikhundleni sokujwayelekile sudo.
Ngemuva kokwamukela, sizokhonjiswa ifomu elilandelayo:
Ngayo sizokwazi ukumisa izici eziningi - hhayi konke okungenzeka- kwe-kdm. Hlola amathuba nokuhalalisela! Khumbula njalo ukuthi iphephe kakhudlwana Shintsha lutho ngaphezu kokukhonjisiwe kumathebhu Abasebenzisi y Comfort.
Ukufaka imodyuli yangaphambilini kungenziwa kusetshenziswa umyalo:
Sincamela indlela yokuqala selokhu siye ngqo kwimodyuli okukhulunywa ngayo futhi akudingeki sidabule ezinye izinketho ezingenakubalwa ze Izintandokazi zesistimu njengomsebenzisi izimpande.
Noma kunini lapho senza ushintsho kumodyuli ye-kdm kufanele senze umyalo:
kdesudo service kdm restart
kcmshell4 iyithuluzi lokwethula ngamanye amamojula kusuka kokuncamelayo kwesistimu noma iphaneli yokulawula ye-KDE. Ngikubheka njengokusiza kakhulu, ikakhulukazi kumamojula angafinyelelwa ngumsebenzisi kuphela izimpande, futhi yibo esibaboniswa zona ngazo zonke izinketho zokucushwa okungenzeka zikhutshaziwe.
Ukwazi izinketho zomyalo, kufanele sithayiphe ikhonsoli:
Futhi nokwazi ukuthi imaphi amamojula esingafinyelela kuwo:
kcmshell4 - uhlu | Okuningi
Uma sifuna ukugcina efayeleni uhlu lwamamojula wezintandokazi zohlelo:
kcmshell4 --list> module-list.txt
Ukubuka ifayela elisanda kudalwa, i-Alt + F2 noma nge-console:
Kusuka kusizo lwe-KDE:
Isahluko 9. Usebenzisa i-kdm ukufinyelela okukude (XDMCP)
I-XDMCP i-Open Group ejwayelekile ethi «X ukubonisa umthetho olandelwayo wokuphatha"(X Display Mukuhlanya Ci-ontrol Pi-rotocol). Kusetshenziselwe ukulungisa ukuxhumana phakathi kwezinhlelo ezikude ngenethiwekhi.
I-XDMCP iyasebenza ezimweni zabasebenzisi abaningi lapho kunabasebenzisi abanezindawo zokusebenza kanye nesiphakeli esinamandla kakhulu esinganikeza izinsizakusebenza zokuqalisa izikhathi eziningi ze-X. Isibonelo, i-XDMCP iyindlela enhle yokusebenzisa kabusha amakhompyutha amadala - iPentium ngisho nama-486. nge-16Mb ye-RAM kwanele ukusebenzisa i-X nokusebenzisa i-XDMCP njengekhompyutha ekwazi ukuqhuba izikhathi zesimanje ze-KDE kuseva. Ohlangothini lweseva, uma iseshini ye-KDE (noma enye imvelo) isebenza, ukusebenzisa enye kuzodinga izinsizakusebenza ezingeziwe.
Kodwa-ke, ukuvumela ezinye izindlela zokufinyelela kumshini wakho kusobala ukuthi kunemiphumela yokuphepha. Kufanele usebenzise le sevisi kuphela uma udinga ukuvumela amaseva we-X akude ukuthi aqale izikhathi zokufinyelela kusistimu yakho. Abasebenzisi abanekhompyutha elula ye-UNIX® abadingi ukwenza lokhu.
Ngezinhloso ezisebenzayo, ngeXDMCP singafinyelela kude ideskithophu yethu futhi sisebenze kuyo njengokungathi sihleli phambi komshini wethu. Kuyisivumelwano seLinux futhi ngayo singakwazi ukuxhumana kuphela nemishini yeLinux.
Ukuze ikhompyutha yethu ifinyeleleke kumishini ye-Windows, kufanele sifake iphakheji xrdp u elinye ithuluzi elihambisanayo. Kepha leyo enye indaba.
Inketho yokuqala iseshini yesilawuli kude ikhutshazwe ngokuzenzakalela ngenxa yezizathu zokuphepha. Uma kwenzeka sisebenza kwinethiwekhi encane, noma ngemishini ebonakalayo kukhompyutha yethu esifuna ukufinyelela kuyo ngalesi sikhungo, kufanele siguqule okungenani amafayela amabili. Futhi bangani, kufanele sithinte ngesandla lawo mafayela wokumisa. Noma kubonakala kunzima, sizobona ukuthi kulula kakhulu!
Owokuqala kubo kdmrc, okumele siyihlele ngezimvume zomsebenzisi izimpande bese uguqula umugqa owodwa wayo esigabeni sayo [Xdmcp] esekupheleni kwefayela. Kuleso sigaba sizothola umugqa othi Nika amandla = amanga, okumele siguqule sibe yiso Nika amandla = iqiniso. Ngakho-ke sitshela i-Kdm ukuthi yamukele izikhathi ezikude.
kdesudo kwrite / etc / kde4 / kdm / kdmrc
Kufanele kube ngale ndlela elandelayo:
Ifayela lesibili okufanele siliguqule yi- Xaccess, okuyiyona enesibopho sokusungula ukuphepha kokungena ngemvume okukude. Sikumema ukuthi ufunde imibono uma ufisa ukukhawulela ukufinyelela kokusebenza kwempahla yakho. Okwamanje sizovumela okwethu ukuthi kufinyeleleke kunoma imuphi umshini oxhunywe kunethiwekhi, ngoba sixhunywe kwinethiwekhi encane noma sifuna ukufinyelela kumshini obonakalayo nge-KDE esebenza kukhompyutha yethu:
kdesudo kwrite / etc / kde4 / kdm / Xaccess
Umugqa kuphela okufanele siwuguqule yilowo onamazwana ekugcineni othi: # any host angathola iwindi lokungena ngemvume. Ukuyekisa ukuqala komugqa, ifayili kufanele libukeke kanjena:
Khumbula ukuqala kabusha i-kdm ukuze ushintsho luqale ukusebenza:
Ungaqala kanjani iseshini ekude kwenye ikhompyutha exhunywe kunethiwekhi?
Singafinyelela kwamanye amakhompyutha amukela izicelo ze-XDMCP ngaphambi kokuqala iseshini nge-KDM ngokuchofoza inkinobho Imenyu -> Ukungena Ekude futhi sizokhonjiswa "Imenyu ye-XDMCP yemishini”Ngohlu lwama-computer asekela ukuxhumana okunjalo.
Uma sifuna ukufinyelela kwenye ikhompyutha ngemuva kokuthi sesivele singene ngemvume futhi asifuni ukuyishiya, enye indlela kungaba ukufaka iphakethe Remmina nge-plugin yakho yephrothokholi ye-XDMCP usebenzisa i I-Synaptic noma umyalo we-console:
ukufaneleka kwe-sudo ukufaka i-remmina remmina-plugin-xdmcp
Ukufinyelela i-Remmina: Imenyu -> i-Intanethi -> Iklayenti le-Remmina Remote Desktop.
Futhi yilokho okwanamuhla abantu!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ukusetha i-KDM
Kuhle kakhulu ngiyabonga 🙂
I-athikili enhle, nginokuphawula okukodwa: Kungani ngisebenzisa i-gksudo ukulungisa / ukuqhuba izinto ku-KDE, lapho i-kdesu ikhona?
Ngithathe isithombe nge-GNOME efakiwe okuyiyona engiyisebenzisa ngokuzenzakalela, kepha ku-athikili kdesudo iyasetshenziswa. kulungile? 🙂
u-freeke wayengazi ukuthi ubeka imikhonzo ye-KDE kusuka lapha
Go Wild, esithombeni esinekhola yethayi nawe, hahahahaha. Sawubona Mngani !!!.
Sawubona usuku oluhle
Ngifake inguqulo ye-kubuntu 12.04 LTS, futhi lapho ngifaka imenyu yokumisa i-KDM, ukufaka ingqikithi, ayiyifaki. Ngizothola izingqikithi ezintsha, futhi azifakiwe.
Ungangitshela ukuthi kwenzekani?
Ngokunjalo, lapho ngiguqula ifonti ngiye kwelinye eliphakeme ngokuncamelayo, lapho-ke lapho ngiqala kabusha, alingihloniphi ... awu ngomunye umbuzo.
Kuthuthukiswe ngokubonakalayo isifaki seKubuntu 13.04